Toriteny 29 Septambra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 29 Septambra 2013
« Manantena fiarovana ny mino »
Nehemia 8 : 7 – 12 / Jaona 10 : 22 – 30 / I Tesaloniana 5 : 23 – 28
Mamarana ny lohahevitra hoe “Manantena fiarovana ny mino” isika eto amin’ny sahan’ny FJKM; Amin’ity Alahady farany ity dia tena manamarina ny Teniny ny Tompo amin’ny alalan’ireo Perikopa telo voalaza etsy ambony ireo fa tsy miova Izy ary tena mbola iantohany tanteraka ny fiarovany ny olony.
Inona ary no lakile ahazoana izany antom-piarovana avy amin’Andriamanitra izany?
1- Mila mankamamy ny Tenin’Andriamanitra isika
Tsy misalasala Andriamanitra mandray antoka tanteraka ny olony rehefa tia ny Tenin’Andriamanitra ny olona iray. Anisan’ny mariky ny fanatrehan’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny olony ny famakiana ny Soratra Masina. Ny Tenin’Andriamanitra no mampiaiky antsika ny fahotana ka ahafahantsika mibebaka, hananana hery hijoroana hiatrika ny fiainana ; ny Tenin’Andriamanitra no ahafantarantsika ny feony ka hanarahantsika izay lazainy. Izany rehatra izany dia anisan’ny mahafaly an’Andriamanaitra ka hanatanterahany ny Teniny manao hoe “Ny fifaliana avy amin’I Jehovah no fiarovana avo ho anay” cf Neh 8: 10 .
2- Mila manolo-tena ho an’I Jesoa Kristy isika
Ny faneken’ny olona ho mpianatry ny Tompo no ahazoany antom-piarovana avy amin’Andriamanitra. Tokony ho fantatsika olombelona fa izaho sy ianao no toy izao dia noho ny fihazonan’Ilay tana-maherin’Andriamanitra. Tsy manana fahefana hamely olon’Andriamanitra ny herin’ny ratsy, raha mahay mipetraka tsara eo an-tanan’Andriamanitra isika. Ny olona manaiky ho tezain’i Jesoa Kristy no omeny toky fa tsy misy maharombaka izay eo an-tanany.
3- Mila mitahiry ilay fahamasinana isika
Ny fahamasinana dia azo avy amin’ny fametrahan-tanana. Fanirian’Andriamanitra ny tsy hananan’ny olony tsiny eo am-piandrasana ny fihavian’Izy Tompo sy manoloana ny voninahiny mandrakizay. Ny olona manamasina ny tenany ho an’Andriamanitra dia azo ambara ho olona tsy misy kianina, ary apetraky ny Tompo ho tsy manan-tsiny satria arovany tsy ho tafintohina na ho solafaka ny maha olona azy manontolo [saina ny vatana ny fanahy ]. Mba hampitoetra tsara ny fahamasinana ao anaty ; dia tena ilaina salama tsara ny saina sy ny fo izay mirakitra ny faharanitan-tsaina, ny vatana na ny corps , ary ny Fanahy izay hiverina amin’Andriamanitra ilay nanome azy .
Ho fehin’izay rehetra voalaza , entanina ny olon’Andriamanitra mba ho tia ny tenin’Andriamanitra ka hazoto ho amin’ny fanoloran-tena ary farany hitahiry ilay fahamasinanana norasintsika avy amin’ny fametrahan-tanana , ireo no antoka ahatanteraka ny fiarovan’Andriamanitra antsika .
Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra Amen!
ANDRIANARISOA Hajanaiaina Célestin , Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 30 septembre 2013